#‎OromoRefugees‬ Ijoollee xixiqqoo Ashiita qacalee. -
#‎OromoRefugees‬ Ijoollee xixiqqoo Ashiita qacalee.
Warra biyyaa baafte
Cubbuun isin dhabne
Badii tokko malee.
Kanaaf obsa dhabnee
Boonye lammiin keessan
Guyyaa naasuuf gaddaa
Amma mala dhabnee.
Isa biyya jiru
Isa dheefa baye
Hireen akkas taate.
Furmaata nuu laadhu.
Waloon: Abdulhalim Xaahir
Previous ‪#‎OromoRefugees‬ Yaa waaq maal yakkinee ?
Next Nuti amma namoota galanattii qajeeluufi deeman hambisuu irrattii xiyyefannee hojjachu qabna.